Amathuluzi Wokuqapha we-SEO angabizi futhi anamandla
NgoMsombuluko, Juni 4, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Sibeke iso lethu phezulu SERPS.com isikhashana manje. Umsunguli UScott Krager usibonise izinhlobo zokuqala futhi sahlabeka umxhwele impela. Sisebenzise isabelo sethu se- Amathuluzi wokuqapha we-SEO ngaphambi. Noma kunjalo, I-SEO iyaqhubeka nokushintsha… Namathuluzi amaningi awagcinanga.
Ithimba likaScott lilwamukele ushintsho futhi laqhamuka nohlelo oluhluke kakhulu… nekhono lokuhlanganisa ngqo ne -Google Analytics, ukuqapha izinkomba zomphakathi, ukukala izimo zokuhlola - konke kungakhoneka ngokusebenzisa isikhombimsebenzisi esibushelelezi somsebenzisi. Lokhu akuyona nje ipulatifomu yokuqala, kepha… ama-SERPs azokuvumela ukuthi uvivinye nakwamanye amazwe ngaphezulu kwamazwe we-65!
UScott ukhomba laba bahlukanisi abalulekile be-4 epulatifomu:
Our Ukuhlolwa kwe-SEO sici sihlanzekile ngempela. Ukuchofoza okungu-3 futhi ungasetha isivivinyo sokuhlobanisa kwe-SEO ukubona ukuthi yini esebenzayo nokuthi yini engekho esikhaleni sakho.
Izikhundla zethu zamagama angukhiye zansuku zonke zihlangana ngokuqinile ne- -Google Analytics ngakho-ke ungabona shazi ukuthi ziyini izithelo ezilengiswe kakhulu kuwe nganoma yiluphi usuku olunikeziwe.
Ideshibhodi ikuvumela ngokushesha ujikeleze amasayithi futhi wenze ukuhlolwa okuyisisekelo kwezempilo esizeni ngasinye. Kuhle uma uphatha amasayithi amaningi.
Our ukubuka kwezinga lekhasi kukuvumela ukuthi ubone kalula ukuhlangana phakathi kwamazinga, ithrafikhi, namamethrikhi enhlalo eshadini elingenzi igazi lakho liphume.
Nakhu ukubuka okuncane kwe-SERPs izici ezizayo ze-SEO zokuqapha ideshibhodi nokusebenza:
Ngenkathi izinhlelo eziningi laphaya zibiza amakhulu noma izinkulungwane ngenyanga, ama-SERP iqala ku- $ 9 ngenyanga… Intengo umthengisi angakwazi ukuyikhokha (futhi okufanele ayisebenzise). Iphakethe labo elikhulu likuvumela ukuthi ulandelele amagama asemqoka ayi-1,000 5,000 kumakhasi ayi-98 ngama- $ XNUMX ngenyanga… akukubi. Qala eyakho Isivivinyo sezinsuku eziyi-14 manje!
Tags: I-google analyticsseoUkuqapha lokhoseo yesikhulumiukuhlolwa kwe-seoithuluzi le-seoama-seo amathuluziizinyoni
UJun 6, 2012 ngo-4: 54 AM
Yaa bangani lokhu kuyiqiniso ukuthi iGoogle Analytics iyithuluzi elihle le-seo kanye nethuluzi leWebmaster futhi